Ma u malaynaysaa in mamnuuca ay Tansaaniya saartay hadalka nacaybka diimaha huriya uu joojinayo weerarrada lala beegsado kaniisadaha iyo masaajidda? - Sabahionline.com
175 Codadka oo dhan
May 25, 2013 @ 08:21:20AM
Xalinta dhibaatooyinka noocaas ahi way fududahay. Qof kasta waa in loo ogolaado inuu ku cibaadaysto hab waafaqsan diinta uu aaminsanyahy isla markaana waafaqsan siday diintiisu dhigayso (sida ku qoran kitaabkiisa). Hadii la arko in qof dadka ka mid ahi uu ka hor imanayo waxa kitaabkiisa kusoo arooray, waa in talaabo laga qaadaa, laakiin maaha in wax la mamnuuco, waayo taa waxa ka dhalan kara nacayb aan waligii dhamaan doonin.
May 24, 2013 @ 03:23:20AM
Talaabadani waa mid horseedi doonta in dunidu ay qaadato diin kaliya, waxaana sidaa ku dhaboobaysa saadaasha kusoo aroortay kitaabka muqaddaska ah ee sawirka bahalka.
May 21, 2013 @ 08:24:50AM
Haa way dhici doontaa